I-Five College Consortium eNtshona Massachusetts
I-Consortium ehloniphekileyo yeeKholeji ezine kunye neYunivesithi enye kwi-Mass Mass.
I-Five College Consortium eWestern Massachusetts 'Pioneer Valley inikeza abafundi kumaziko amalungu ngobuninzi bamathuba emfundo. Abafundi banokwenza iiklasi kuzo naziphi na iinkampu ezihlanu ezivumela ukuba luhlobo lobubanzi kunye novavanyo oluqhelekileyo olungenakwenzeka kwikholeji enye. Edibeneyo, iikholeji ezintlanu zinikeza izifundo ezingama-6,000 ukuya kwii-40,000 zeeprogram. Ibhasi yamahhala idibanisa zonke iikampus. Abafundi banokuphinda baxhamle amathuba enkcubeko kunye nekharityhulam kuwo amalungu ekampu.
I-consortium inokuba yinto efanelekileyo kubafundi abafuna ubugcisa bobukhoma okanye amaziko asekholejini amava, kodwa bakhathazeke ngamathuba athile (okubini kwezentlalo kunye nezifundo) ezihambelana nezikolo ezincinci. Kubafundi abaya kwi-UMass Amherst, i-consortium ibenza bafumane ubunzulu bezemfundo kwi-kholeji encinci ngelixa beya kwiyunivesiti ephakamileyo yabafundi abangama-30,000.
Amherst College. I-Credit Credit: Allen Grove
Indawo: Amherst, eMassachusetts
Imilinganiselo yokwamkela: 14%
Uhlobo lweSikolo: igraduate yobugcisa bobugcisa kunye nekholeji yezobugcisa
Iimpawu ezahlukileyo: enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu kwilizwe; Umyinge othakazelisayo we-8 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; uncedo oluncedo kakhulu lwabafundi abafanelekayo; isahluko sePhi Beta Kappa sokugqwesa ubugcisa bobugcisa kunye nezesayensi
Funda kabanzi kwiNgxelo yeKholeji yase-Amherst
Ukungena: GPA, SAT, ACT Umdwebo we-Amherst
IHolshire College. redjar / Flickr
Imilinganiselo yokwamkelwa : 56.5%
Iimpawu ezahlukileyo: Indlela engaqhelekanga kwimfundo ye-grade-grade apho uvavanyo lugqwesileyo, kungekhona ubuninzi, kwaye abafundi baqulunqa izikhundla zabo ngokusebenza nomcebisi wezemfundo
Funda kabanzi kwiNgxelo yeKholeji yaseKhamshire
Ukungena: GPA, SAT, ACT Umdwebo we-Hampshire
KwiKholeji yaseHolyoke. John Phelan / Wikimedia Commons
Indawo: South Hadley, eMassachusetts
Imilinganiselo yokwamkela: 50%
Uhlobo lweSikolo: i- undergraduate ubugcisa bobugcisa kunye nezesayensi kwikholeji yabasetyhini
Iimpawu ezahlukileyo: Ukuvunywa kwe-Test-optional, i-campus enhle kunye negadi, amachibi, imifudlana, kunye neendlela zokuhamba ngokuhamba; enye yeekholeji zezona ziphezulu zamabhinqa
Funda kabanzi kwiProgram yaseKholeji yaseHolyoke
Ukwamkelwa: GPA, SAT, ACT Grafu kwiNtaba yeHolyoke
I-Seelye Hall e-Smith College. Allen Grove
Indawo: Northampton, Massachusetts
Imilinganiselo yokwamkela: 38%
Uhlobo lweSikolo: ubugcisa be-liberal kunye nesayensi yekholeji yabasetyhini
Iimpawu ezivelele: Enye yeekholeji zezilwanyana eziphezulu kwi-US; yintsimi engummangaliso kunye negadi yezityalo; I-alumnae edumileyo iquka uGloria Steinem, uSylvia Plath, kunye noJulia Child
Funda ngakumbi kwiNgxelo yeKholeji yaseSmith
Ukwamkelwa: GPA, SAT, ACT Graph kuSmith
IYunivesithi yaseMassachusetts eAmherst
IYunivesithi yaseMassachusetts e-Amherst Student Union. Allen Grove
Ixabiso lokumkela: 58%
Iimpawu ezahlukileyo: Iphakamileyo ngokubhekiselele kwiyunivesithi yophando kunye neenkqubo eziqinileyo eziphunyeziweyo kunye neeprogram ze-graduate; ithala leyunivesithi ende kunazo zonke ehlabathini; ilungu leCandelo le-NCAA iNdibano ye- Atlantic 10
Funda ngakumbi kwiNgxelo ye- UMass Amherst
Ukungena: GPA, SAT, ACT Umdwebo weMass
Hlola ezinye iikholeji eziMkhulu kwiNgingqi
Imephu eNew England.
Ukuba awufumani isikolo sakho sephupha kwi-Five College Consortium, qiniseka ukuba uhlole ezinye iikholeji ezinkulu nakwiiyunivesithi kummandla:
25 Iikholeji eziphezulu zeNew England naseYunivesithi
36 Iikholeji ze-Middle Middle Atlantic neeYunivesithi
12 Iikholeji zaseMassachusetts eziphezulu kunye neeYunivesithi
9 Iikholeji eziphezulu ze-Connecticut kunye neeYunivesithi
12 Iikholeji eziphezulu zeNew York neeYunivesithi
I-Chemistry yeBorex isebenza njani njengoCoceko (i-Sodium Borate)
Imbali ye-Ice Capades